6 Mar Oo Muhiim Ay Tahay Inaad Amaanto Gacalisadaada | Aayaha
Aayaha editorJune 13, 2020
Waxaa jira waqtiyo muhiim ah oo gacalisadaada loo muujiyo qadarin laguna amaano waxyaabaha ay sameyso. Hoos ka akhriso.
Markii ay wax kuu sameyso
Aad ayay muhiim u tahay inaad qadariso gacalisadaada marka ay wax kuu sameyso; haddii ay noqon lahayd waxaad ka codsatay ama xittaa hadii aysan ahayn wax aad qiimeyso.
Haddii ay waqti galisay oo dadaal ay ku bixisay inay wax kuu sameyso, waa inaad amaanto una mahadcelisaa.
Markii ay wax yar xittaa kuu sameyso
Dadka qaarkood waxay gacalisadooda u mahad celiyaan mark ay wax weyn u sameyso oo kaliya; kuma qadariyaan markeey wax yar u sameyso iyagoo u arka wax caadi ah — balse waa qalad taas. Waa in gacalisadaada ku amaantaa kuna qadarisaa xittaa waxyaabaha yar yare e ay kuu sameyso.
Markay had iyo jeer kuu taagantahay/garab ay kuu tahay
Gacalisadaada waxay noqon kartaa mid kuu heelan markaad ubaahato; waxay noqon kartaa mid diyaar kuu ah dareen ah iyo taageero ahaan waqtiyada aad u baahantahay waa inaad ku qiimeysaa kuna amaantaa taas.
Markay guul gaarto
Marka gacalisadaada ay wax ku guuleysato ama hormar ay sameyso, waxbarasho ama ganacsi ama waxyaabo kale oo nolosha qeyb ka ah, waa inaad ku dhiiri gelisaa kuna amaantaa dadaalkeeda.
Marka ay hormariso xiriirka
Ma jiro qof dhammeystiran, qof kasta waxa uu sameeyaa qalad xittaa waxaanu ku sameynaa xiriirka.
Si’kastaba waxaa muhiim ah inaad gacalisadaada ku amaanto marka ay hormar kusoo kordhiso xiriirka oo aad ku dhiiri gelisaa.
Marka ay dadaal walbo sameyso
Marka ay gacalisadaada usoo go’do guurka isla markaana ay aad uga shaqeyneyso sidii uu uhormari lahaa, waa inaad uga mahadcelisaa kuna amaantaa. Ma noqon karto kaliya mid ku saabsan guurka balse sidoo kale sidii ay u daryeeli lahayd caruurta iyo hooyga uga mahad celi way mudantahay.